ဟက်ကာ ဆိုလို့ … ခွစ် ခွစ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ဟက်ကာ ဆိုလို့ … ခွစ် ခွစ်
ဟက်ကာ ဆိုလို့ … ခွစ် ခွစ်
Posted by စိန္ၾကက္ဆင္ on Sep 4, 2012 in Aha! Jokes, Satire, Contributors | 58 comments
မနေ့က ရွာထဲမှာ ပွဲဆူနေတော့ အီဖေကိုယ်လဲ အမြီးတောင် မထောင်နိူင်ဘူး …. ကြောက်လိုက်တာလဲ ဖင်တောင် တုန်လို့ဗျာ …. မန်းလေးဂဇက်ဆိုတဲ့ အမေဒစ်ကန် ဖောင်ဒါတွေ တည်ထောင်ထားတဲ့ ဝက်ဆိုဒ်ကြီးကို အမျိုးဘာသာ သာသနာကို ချစ်မြတ်နိူးတဲ့ လူတစုက ပညာရှင်ဆန်ဆန် ဘမ်းကျတယ်တဲ့။ အဲ့ မန်းဂေဇက်က အသိတွေ ပြောလို့ သိရတယ်……. ဟိုက်ရှာဘား အလွန်ထိတ်လန့်ဖွယ် ကောင်းတဲ့ သတင်းပါဘဲ။ ဒါနဲ့ ဘာဆက်ဖြစ်လဲ မေးကြည့်တော့ အခုမန်းဂဇက်ကို ဝင်လို့မရတော့ဘူးတဲ့ ဃိန် …. ဂိန် …ကိန် သွားပီဟလို့ အော်မြည်လိုက်မိတယ် …..။ ဒါနဲ့ဘဲ ညနေလောက်ကျတော့ ပြန်ဝင်လို့ ရပီ ဆိုလို့ ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ အိုင်ပီလေးချိန်း ( အထင်တော့ မကြီးနဲ့ ကျုပ်တို့ဆီမှာ အိုင်ပီချိန်းတာ ဆော့ဝဲမလိုဘူး ထိုင်နေကြ အင်တာနက်ဆိုင် မသွားဘဲ တခြားဆိုင် သွားလိုက်တာကို ပြောတာ ) မန်းဂဇက်ထဲ ဖရီးအကောင့် ရစ်ဂျစ်စတာလုပ်ပီး ဝင်လာလိုက်တော့ လားလား … ပညာရှင်တွေ ကိုယ်တိုင် ဆင်းလာပီး ပို့စ်တွေတင် ကွန်းမင့်တွေ ရေးထားကျ ဒက်ရှ်ဘုတ်မှာလဲ အသိပေး သတိပေးစာတွေ တွေ့ရတော့ အတော်ကို ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ ဟက်ကာတွေပါလားလို့ အံ့ဩမိတယ် နည်းနည်းမြှောက်ပြော ရရင် စားထားတဲ့ ကွမ်းယာတောင် ယောင်ပီး အရည်တွေကော အဖတ်တွေပါ မြိုချမိသွားတယ် ဂလု.. ခွစ်… ခွစ်
ဒါနဲ့ ဟိုဖတ်ဒီဖတ် လျှောက်ဖတ်ရင်း ဆြာ့ ဆြာတွေရဲ့ ဦးတည်ထားတဲ့ လမ်းကြောင်းက ထင်းထင်းကြီး ပေါ်လာတယ်။ ဟို သံတွဲက တယောက်ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဆော်ချင်တာနဲ့ အမျိုး၊ဘာသာ၊ဿသနာ အတွက်ဆိုတာတွေရော နည်းပညာတွေရော အစုံလုံအောင် ဖုံးထားပေမဲ့ နောက်မှာ ရေးလာတဲ့ စာတွေက အကုန်ပေါ်နေပီး ဖင်ကြီးပြောင်နေတာ တွေ့တော့မှ အော် သူတို့က ငါ့လိုဘဲ ပုဆိုးသေးသေးခြုံပီး မိုးရေထဲ လမ်းထွက်လျှောက်တဲ့ သူတွေပါလားလို့ တွေးမိရဲ့ … ကျုပ်ပုဆိုးခြုံပီး လမ်းလျှောက်ရင် ရှေ့ကတော့ နင်ဂျာလိုလို အဆဆ်စင်လိုလိုပါဘဲ နောက်မှာက မလုံတော့ အကုန်မြင်နေရတယ်….. စိတ်ကူးထဲမှာသာ မြင်ကြည့်ပေတော့….။ ထားပါ စကားမစပ် ပြောရရင် ကျုပ်တို့ တနာရီ ၃၀ဝပေးပီး လက်ကမြင်းကြောထနေတဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ထလို့ရတဲ့ ဒီဆိုဒ်ကိုလာလုပ်တော့ ကျုပ်လည်း နည်းနည်းတင်းတယ်။ အေးရှင်းရှင်းပြောရရင် ကျုပ်လို ပေါက်လွတ်ပဲစား တယောက်က ဆိုဒ်တကာ ဆိုဒ်မှာ ဘာမှမတတ်ဘဲ သူများရေးသမျှ ဝင်ဆဲတဲ့ကောင်က မန်းဂေဇက် ရောက်လာတော့ ဟာ… ဆဲတာဆိုတာလဲမရှိ ဟိုအပြာပုံတွေ မလုံ့တလုံပုံတွေလဲ မတွေ့တော့ အစပိုင်း ဝင်ရတာ နည်းနည်းပျင်းသလိုဘဲ နောက်ပိုင်းမှ လမ်းထိပ်က ဆိုက်ကာသမား ဆိုးအောင်မိုးနဲ့ အရက်သမားဇော်သူရတို့က ” ဟေ့ကောင် ငါတို့လဲ အရင်က သောက်လုပ်မရှိရင် တခြားဟာတွေ လိုက်လုပ်နေကျတာ မန်းဂေဇက် ဝင်ဖတ်ဖြစ်မှဘဲ လိမ္မာရေးခြား ရှိလာတာတဲ့ ….” ခုဆို သူတို့ နယ်စည်းမခြား အရက်သမားသမဂ္ဂတွေ ဘာတွေထဲ အဖွဲ့ဝင်လို့ အရက်သောက်နည်း သင်တန်းတောင် တက်နေပီဆိုဘဲ ဘာဘဲ ပြောပြော မကောင်းတာလုပ်တာတောင် အခြေမြစ်ကျကျနဲ့ သိက္ခာရှိရှိ လုပ်တတ်ဖို့လိုတာပေါ့ ။ကျုပ်တို့လမ်းထိပ်က ကေတီဘီမှာ ဝိတ်တာလုပ်နေတဲ့ ချိုတူးတောင် မန်းဂေဇက်မှာ အရိယသစ္စာတွေ နာကြားပီး မိုးပြာချိုတူးဆိုပီး နာမည်ကြီးနေလေရဲ့ … ကျုပ်တောင် မန်းဂေဇက် ဝင်ပီးနောက်ပိုင်း တခြားဆိုဒ်တွေမှာ အပြာပုံတွေ မကြည့်ဖြစ်တော့ဘူး ရိုးရိုးသားသား ဒတ်ပုံပညာကို လေ့လာတတ်ဖို့ မာဘယ်ကောမတ်ရဲ့ ဓာတ်ပုံပို့စ်တွေ အူးဖွတ်ကျားရဲ့ မော်ဒန်ကဗျာတွေ လေ့လာဖြစ်လေရဲ့ အရင်ဆို အင်တာနက်ဆိုင်သွားပီး ပြန်လာရင် စိတ်တွေက မရိုးမရွဖြစ် ဒီကြားထဲ ဆိုးအောင်မိုး ဆိုက်ကား လာစီးတဲ့ စကတ်တိုဝတ် ကာလသမီးတွေကြည့်ပီး စိတ်တွေထနေတာ ခုဆို ချိုတူးရဲ့ တရားတွေ နာထားတော့ အဲ့လို မဖြစ်တော့ဘူး။ ကဲပါလေ ပြောချင်တာကတော့ နည်းပညာ အကြောင်းပါ … ခုဆို ဒီဒေါ့စ်ဆိုတဲ့ အဖွဲ့ကြီးလဲ ရွာထဲမှာ ရောက်လာပီဆိုတော့ ကျုပ်ရွာ အပိတ်မခံနိူင်လို့ မခံချင်စိတ်နဲ့ လေ့လာဖြစ်တာ ဒါတွေ တွေ့လေရဲ့ ……။ ကျုပ်လဲ ခြောက်တန်းသာ မအောင်တာ ဂဇက်ဝင်ဖတ်ရင်း မြန်မာစာလက်ကွက်တို့ သတ်ပုံတို့ မှန်လာတော့ အကျိုးရှိစေတဲ့ ဒီဆိုဒ်ကို ကာကွယ်ဖို့ ဒီနေ့က စပီး တန်ပြန်ဟက်ကာ လုပ်မယ်ဆိုပီး အင်တာနက်မှာ ရှာနေတုန်း ဟက်ကာဆြာ တယောက်နဲ့ သွားတွေ့လေရဲ့ … အဲ့မှာ ဇာတ်လမ်းစပီ ဒန့် .. တန့် …တန့်
ဟက်ကာ မလုပ်ခင် အင်တာနက် ဆက်ကြောင်းတွေ အကြောင်းလေ့လာပါတဲ့ ဘက်ဘုန်းဆိုလား …ဒီလိုတွေ့ခဲ့တယ်……
ကျုပ် အရှာမှားသလားဘဲ ကမာ္ဘကျော် ဟက်ကာတယောက်ကတော့ ဒီလိုပြောဖူးတယ် ကွန်ယက်တွေကို ဖောက်ချင်ရင် သူတို့ရဲ့ ဆက်ကြောင်းတွေကို ရှာဖို့ ဆာဗာတွေရဲ့ နောက်ခံလမ်းကြောင်းမှာ ဘက်ဘုံးတွေ ရှိတယ်တဲ့ ….. ခုဟာက ခိုအရိုးကြီး ဖြစ်နေတယ်
ဒါကတော့ ပန်တဂွန် စစ်ဌာနချုပ်က အလိုရှိနေတဲ့ ကမာ္ဘကျော် ဟက်ကာ ဘရာဇီးသား တီအာ ရောဂျေနဟို အဝီဖတ်ရှာတဲ့ …. ကဒါဖီရဲ့တူလို့ပြောကျတယ်။ အောက်စဖို့တက္ကသိုလ် ဆင်းပီး အမေရိကန် လေတပ်စခန်း၆ခုနဲ့ ဝက်စ်ပွိုင့်ရဲ့ ဒေတာဘေ့စ်တွေကို ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးခဲ့သူတဲ့။ သူရဲ့ နည်းပညာတွေကြောင့် ဂနေ့အထိ ကက(လေ)မှာ ပိုင်းလော့တွေ ဖလိုက်ဟာဝါ အပြည့်မပျံတော့ဘဲ အုပ်မှူးနဲ့ပေါင်းပီး ဆိခိုးရောင်းတဲ့ စနစ်တွေ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်တဲ့။ ၂၀၀၂ခုနှစ်က အမေရိကန်လေတပ်ပိုင် F-22 Raptor လေယာဉ်ရဲ့ ဒတ်ပုံတွေကို ခိုးယူခဲ့ပီး ဩစတြေးလျသား တစ်ဦးကို ရောင်းစားခဲ့တယ် ဘီဘီဖိုးရှာတာတဲ့ သူတို့များ နည်းပညာနဲ့ အပျော်လုပ်တာတောင် အကြံတော်တော်ကြီးတယ်…. သူက ဘာပြောလဲဆိုတော့ ဒေါင်းလွတ်စပိ 500/kbps တောင် မမြင်ဖူးတဲ့ မြန်မာပြည်မှာ ဟက်ကာတွေ ကောင်းစွာ အလုပ်လုပ်ဖို့ အတွက် အဓိက ထိုးနှက်ချက်ဘဲတဲ့ နောက်ပီး Core i7 Desktop PC တလုံးလောက်နဲ့ Window7ခိုးကူးခွေ သာသုံးနေသေးတဲ့ လိုင်စင်မဲ့ ဆော့ဝဲပေါင်းစုံပါ ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးဟာ ယခုခေတ် နက်ဝက် ရုထ်တွေကို ဖြတ်ကျော်ဖို့ ခက်ခဲနေသေးတယ်တဲ့ ။ ဒါက ကျုပ်တို့ကို တိုက်ရိုက် စော်ကားတာ … မခံနဲ့ ပြန်ချဂျဘာ ..
သဂျီး Kai ဆိုတာလဲ မမြင်ဖူးဘူး၊ ဒါပေမဲ့ အဆင့်အတန်း ရှိနေတဲ့ ဆိုဒ်တခုကို ဟုတ်တိပတ်တိ မပြောပလောက်တဲ့ အကြောင်းအချက်လေးနဲ့ မွှေတာ နှောက်တာတော့ လက်မခံဘူး … ဒီဆိုဒ်မှာ ကို ရို့စ်မင်းတို့ ၊ ကိုပစ်ပစ်ချန်တို့ ကိုအီးတုံးတို့ မအာဂတို့လို နက်ဝက် သမားတွေ အိုင်တီ ပညာရှင်တွေ အများကြီးဘဲ အဲတော့ နာဂရနဲ့ ဖြစ်တဲ့ပွဲမှာ မဆီမဆိုင် ဂဇက်ကို ဓါးနဲ့လာမချိုင်နဲ့ .. အိုကီဆပ်ပြာနဲ့ အားလုံးကို We will be Washing all လုပ်ပလိုက်မယ် … ဘာမှတ်လဲ ခွစ်..ခွစ်
အဲတော့ ကျုပ်လဲ ကျုပ်အဘ လယ်ကို ထွန်ပေးနေတာ ခဏရပ်လို့ ဟတ်ကာ လုပ်တော့မယ် …. အဲရွာထဲ အသက်၉ဝကျော် အဘွားပုချ် ပြောတာတော့ ဟက်ကာ ဆိုတာ ဂျိုနဲ့လားတဲ့။
အဘပေက ပြောဖူးတယ် ကောင်လေး ဟက်ကာဆိုတာ ကာကြက်နဲ့ ဘာကွာလဲတဲ့
အူးလေး ဖိုးထောင်ကတော့ မင်းမြို့သွားပီး ဟက်ကာ သွားလုပ်ရင် ဟက်ကာဆိုတာ ဒီဂျေလို နာမည်တပ်ပီး တရားဝင် ကြေငြာလို့ ရလားတဲ့ … ရွာထဲမှာ DJ Novy တို့ DJ Wei တို့ရှိတယ်လေ….။
အခု ကျုပ် အဘပါလေရာရဲ့ ထော်လာဂျီနဲ့ မြို့တက်မလို့ အူးဆာမိဆီမှာ ဘရာကြော် ၂ကျပ်ဖိုး ဝယ်နေတယ်၊ မြို့ရောက်ရင် ဂျီးတော်ဆူးတို့ အိမ်မှာ တည်းမယ်။ ကိုရင်ကြီး ရဲရင့်လှိုင်တို့နဲ့ ကျုပ်သိပ်ကြိုက်တဲ့ တွတ်ပီစာအုပ် ငှားဖတ်မယ် Ke$ha ရဲ့ မောင့်အချစ်မြားစူး နားထောင်မယ်။
ကဲ ကြွပီ ရွာစားရေ ကျုပ်ကို အလင်္ကာကျော်စွာ ရွှေမန်းကိုပေါက်ရဲ့ Rain Over Me နဲ့ ပို့ဗျာ ………
အော် ဒါလေး ထပ်ဖြည့်ပေးလိုက်မယ် ကျုပ်လေ့လာနေတာတွေပေါ့…..
ကြက်ဥ ဟက်ဖရိုက်ကို အကာဘဲ စားသော ဟက်ကာယဲဆီ ( မြန်မာဒရိုင်းဂျင် ဒရင့်ကင်း ဒလဟော ဂလု)